Modular Connected 41: TAG Heuer dia manolotra famantaranandro kely kely kokoa | Androidsis
TAG Heuer dia nanolotra ny maodelin'ny fiambenana vaovao. Efa akaiky izao mpandimby ny Modular Connected 45. Miaraka amin'ity maodely vaovao ity, ny marika dia mikasa ny hanatsara ny fahombiazan'ny famolavolana teo aloha. Ho fanampin'izay, natao ho an'ny fehin-tanana kely kokoa miaraka amin'ny habeny mihena koa izy io. Hatramin'ity tranga ity dia sehatry ny savaivony 41mm. Tonga ny Modular mifandray 41.
Herintaona lasa izay rehefa Niara-niasa tamin'i Intel i TAG Heuer ary nandefa ny Connected Modular 45. Natao dokam-barotra ho an'ny inona izy io, famantaranandro mahery fampiasa, avo lenta. Saingy, noho ny habeny, dia lehibe teo amin'ny hatotanany maro izy io. Satria, mandefa maodely kely kely kokoa izy ireo izao.
Ny hevitra miaraka amin'ity Connected Modular 41 dia ny fanatsarana ny fahombiazan'ny famantaranandro teo aloha ary hanome modely marobe kokoa. Koa satria ny habeny kely kokoa dia famantaranandro mety ho an'ny mpampiasa maro izy io. Ka toa nahavita nahatratra ny lakilen'ny fanalahidy i TAG Heuer tamin'ity indray mitoraka ity.
Ny famaritana ofisialy an'ity Connected Modular 41 ity dia efa naseho sahady. Ka ity miafina ity dia tsy misy miafina amintsika. Ireto ny fiparitany:
Miantso miaraka amin'ny savaivony 41 mm
390 x 390 teboka famahana
Famirapiratana efijery mahomby kokoa
Fitehirizana: 8 GB
Fifandraisana GPS sy NFC
Mahatohitra rano (azo asitrika hatramin'ny 50 metatra)
Mifanaraka amin'ny telefaona Android 4.4 sy ambony ary koa amin'ny iOS 9 sy ambony
Izy io dia manana tadiny 9 hafa hifandraisana amin'ny famantaranandro
Fanohanana ho an'ny Google Play
Tsy misy fisalasalana miavaka noho ny maodely feno kokoa noho ny teo alohany. Ohatra, nanitatra ny fahafaha-mitahiry izy ireo amin'ity tranga ity. Ho fanampin'ny fanatsarana ny famahana sy ny famirapiratan'ilay efijery. Andininy mahomby ity Connected Modular 41 ity dia iray amin'ireo fiambenana tsara indrindra eo amin'ny faritra misy azy.
Araka ny efa nampoizina, ity maodely TAG Heuer ity dia tsy miavaka amin'ny vidiny mora. Hatramin'ny nanambarana ny vidin'ny ofisialin'ny smartwatch. Ny vidin'ity Connected Modular 41 ity dia $ 1.200. Vidiny manaraka ny andalan'ny mahazatra amin'ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Modular mifandray: Ny famantaranandro vaovao avy amin'ny TAG Heuer